नगरपालिकाको गोप्य सूचना तस्कारलाई कसले दिन्छ?-मेयर (अन्तरवार्ता) - The Public Today
नगरपालिकाको गोप्य सूचना तस्कारलाई कसले दिन्छ?-मेयर (अन्तरवार्ता)
१७ बैशाख २०७७, बुधबार २३:४७
कोरोना भाइरसको महामारीलाई पराजित गर्न देशका सबै शक्ति अहोरात्र खटिराखेको छ । देश लकडानमा छ । यसैको मौकाछोपेर प्राकृतिक श्रोतसाधनको दोहन ह्वातै बढेको छ । महोत्तरीको गौशालास्थित मरहा र बाँके खोलामा तस्करहरु रातारात लाइट बालेर नदी दोहान गरिराखेको छ ।
प्रहरीप्रशासन र सरकार आँखाचिम्म गरेर मस्तले निदाइराखेको छ । हरियो बन नेपालको धन, खोलानाला हाम्रो जीवन हो । तस्करहरुले चुरेमा आँखा गाडेर बसेका छन् भने, क्रसर व्यवसायीको भेसमा गुण्डागर्दी गर्दै खोला उत्खनन जारि छ । जो देशको कानुन मान्दैनन्, नितीमा बस्नु पर्छ भन्ने ठान्दैनन् । अदालतको आदेशलाई समेत धज्जी उडाउँदै खोलानालामा उत्खन्न गरिरहेका छन् ।तर, स्थानीय सरकार प्रहरीप्रशासन टुलुटुलु हेरेर बस्नुसिबा के गर्नु पर्छ भनेर ठान्दैन ।
लकडाउनमा कसरी, किन, कसले खोला उत्खन्न गर्दै छ भन्ने विषयमा द पब्लिक टुडे र सामुदायिक रेडियो दर्पण ८८.४ मेगाहर्जको लोकप्रिय कार्यक्रम जनचासोको टोलीले महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाका मेयर शिवनाथ महतोसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ :
१. लकडाउनको मौकाछोपी प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहोन, चोरीतस्करी भइरहेको बारे मेयर ज्यू यहाँलाई कतिको थाहा छ ?
—यस बिषयमा भन्नुपर्दा हाम्रो समाजमा केही व्यक्तिहरु छन् । जो बनजंगलबाट काठ चोरी गर्ने गरेको सुनिराखेको स्थिती छ । तर, प्रमाण आजसम्म भेटेको छैन् । गौशाला नगरपालिकाको मरहा खोलाको जो उत्खन्नको बिषय छ, नगरपालिका आफै अनुगमनमा गएको छ । केही उधोगपतिहरुले उत्खन्न गरेको देखिन्छ । तर उत्खन्न गरेको उधोगपति तथा कुनै व्यक्ति फेला परेको छैन ।
२.मरहा खोलाको ठेक्का नगरपालिकाले लगाएको छ कि छैन, मेयर ज्यू ?
—हामीले मरहा खोला ठेक्का लगाएका छौं । ठेक्का स्वीकृत भएपनि अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । अदालतको अर्को आदेश नआएसम्म खोला उत्खन्न नगर्न नगरपालिकाले ठेक्दारलाई समेत जानकारी गराएको हो । तर, खोला उत्खन्न भइरहेको कता–कताबाट कुरा सुन्नमा आइरहेको छ । दिनमा त उत्खन्न गर्दैनन् राती १२ देखी १ बजेपछि खोला उत्खन्न हुन्छ भन्ने कुरा सुनेको छु ।
३.राती–राती खोला खन्नु गलत होइन् ?
—यसरी राती–राती उत्खन्न गर्नु गलत हो । चोरेर उत्खन्न गर्नेलाई ३० हजारदेखि ३ लाखसम्मको जरिवाना गर्ने हामीले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेका छौं । यदि सामुदायको कुनै पनि व्यक्तीले उत्खन्नको बेला टिपर, लोडर, उपकरण पक्राउ गर्छ भने जरिवानको ३० प्रतिशत उसले पाउने व्यवस्थाको साथै समाउने व्यक्तीलाई उपहारका दिने निर्णय पनि गरेका छौ ।
४.कसैले पक्रेर ल्याएर बुझाएको छ ?
—समुदायको कुनै व्यक्तिले अहिले सम्म एकजना पनि समातेर बुझाएको स्थिती छैन् । सुरक्षाकर्मी तथा इलाका प्रहरी कार्यालयले पनि लकडाउनको बेला उत्खन्न नगरौ कुरा सबैसंग अनुरोध गर्दै आएको छ । यदी इलाका प्रहरी कार्यालयले कुनै टिपर समातेर ल्याउछ भने जरिवानाबाट ५० प्रतिशत दिने पनि निर्णय भएको छ ।
५.यो देशमा तस्करहरु दमदार छन् कि सरकार ?
—तस्करहरु दमदार हुन सक्दैनन् । तस्करहरु सरकारलाई भजाउन चाहन्छन् । यदि सरकार पैसामा बिक्दैनन् भने आफै तसकरहरु तह लागेर जान्छ । तर, सरकारमा पनि केही कमिकमजोरीले तस्करहरुको मनोवल बढेको छ । तर, गौशाला नगरपालिकाले तस्करहरुलाई माफदण्डभित्र राख्ने प्रक्रियामा लागिपरेको छ ।
६ यहाँ सरकार पनि छ, प्रहरी—प्रशासन पनि छन् । कानुनले अबैध नदी दोहन गर्ने छुट कसैलाई दिएको छ ?
—कानुनले छुट दिएको छैन, छुट दिनेवला पनि छैन । लकडाउनको समयमा हामी पनि राहत वितरण गर्न तिर व्यस्त भएको समयमा तस्करहरु मौका पाएर नदी दोहन गर्ने कोशिस गरेको पाईन्छ । पटक–पटक सुरक्षकर्मीलाई नदीमा पठाएका छौ । तर सुरक्षाकर्मी जाँदा नदीमा कोही हुदैनन् । तस्करहरुको सीआईडी दरो परेको छ ।
७.को हो त्यो सीआईडी, मेयर ज्यू ?
—त्यस्ता सीआईडीहरुलाई अन्त गर्नु जरुरी भएको छ । को हो त्यो सिआईडी ? हामी खोजतलास गर्दैछौ । यो बिषयमा अनुगमन समिति पनि चनाखो छ । तर, कहाँबाट र कसले यस्तो कार्य गरिरहेको छ, थाहा भएन । हामीले गरेको निर्णय कहाँबाट लिक हुन्छ । यो सबै बिषयमा हामी गम्भिर बनेका छौ । यदी त्यस्तो व्यक्तिको प्रमाण फेला प¥यो भने नगरपालिकाले छोड्नेबाला छैन् ।
८.तपाईंहरुको सूचना तस्करलाई कसले दिन्छ ?
—हाम्रै नगरपालिकाका वा सुरक्षाकर्मीेले पक्कै पनि तस्करलाई हाम्रो सूचना दिएको हुनसक्छ । हामी पत्ता लगाउँदै छांै । हामी कति खेर कहाँ जादैछौं भन्ने कुरा उनीहरु(तस्कर)लाई कसरी जानकारी हुन्छ ?
९.राजनितिक दलका नेताले प्राकृतिक दोहन बचाउनको लागि भुमिका निर्वाह गर्ने हो कि दोहन गर्न तस्करहरुलाई साथ दिने हो ?
—तस्करलाई साथ दिने कुरै छैन । नेताले साथ दिएपनि नगरपालिकाले साथ दिदैनन् । यो बिषयको लागि नगरपालिकाले माफदण्ड बनाएको छ । यसमा मेरो नजिकको कुनै व्यक्ति किन नहोस वा कुनै राजनितिक दलको व्यक्ति किन न होस केही दिनमै दुधको दुध पानीको पानी तपाईंहरु समक्ष जाने छ ।
१०.मेयर साहव, अबैध उत्खनन रोक्न जाँदा नदीमा मर्नु परेको छ । कसले अबैध कामको विरोध गर्छ ?
—प्रहरीको सुरक्षाले मात्र हुदैन । हामी आफ्नो सुरक्षाको लागि सामुहिक टिम बनाउनुपर्छ । सामुहिक टिम भन्दा ठुलो तस्करको टिम हुदैनन् । नदीको अबैध उत्खन्न गर्न गएका टिम कुनै शसस्त्रधारी टिम होइन् । त्यसैले यिनीहरुको बिरुद्वमा सामुहिक टिम बनाउन नगरपालिकाबाट मान्छे खटाईसकेका छौ ।
११.नदी दोहनका लागि ठेकदारले ठूलाठालु, बोलबालालाई कमिसन दिन्छ नि ?
यस्तो कमिसन खाने कुरो मलाई थाहा भएको छैन् । तर कता कता यस्तो कुराहरु जोडेको पाइन्छ । हामी संग अहिलेसम्म कुनै प्रमाण छैन । म कसरी सिधै आरोप लगाउ । तर, ठेक्दाहरुले आफ्ना आसेपासेलाई जोडेको हुन्छ । जुन हिसाबले बाँके खोलाको कुरो आएको छ ,त्यस्तो मलाई लाग्दैन । बाँके खोलामा उत्खन्न भएको पनि छैन् । तर मरहा खोलाको बिषयमा अनुगमन जाँदा देखेको छु, सुनेको पनि छु । बाँके खोलामा कुनै किसिमको उजुरी परेको छैन । नगरपालिकाको नियम विपरित उत्खन्न गरेको छ भने स्थानीयलाई रोक लगाउन समेत हामीले अनुरोध गरेका छौ ।
१२.चुनावताका तपाईले भन्नु भएको थियोे कि गौशाला नगरपालिकामा कमिसनको खेल हुन दिदैंनौं , अबैध काम हुदैन । तर, उल्टो भएजस्तो छ, हजुरको खालामा अबैध रुपमा उत्खनन भइरहेको छ, डिलमा अबैध क्रसर सञ्चालमा छन् । यो कसरी भयो ?
वडाकार्यालयहरुले हामीसंग छलफल नगरिकन क्रसर चलाउन सिफारिस दिएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुरेश प्रसाद सिंहलाई हामीले जानकारी गराएको छु, मैले जिल्लालाई प्रश्न पनि गरे सिफारिस वडाबाट जाने कि नगरपालिकाबाट ? यो तपाई जवाफ दिनुस् । तर जवाफमा यो सिफारीस नगरपालिकाबाट हुने कुरो आयो । अनि मैले भने सिफारीस लिनेको लाइसेन्स तपाई सिज गर्नुस् । नभए नियमले वडाबाट सिफारीस पाउछ भने प्रष्ट गरेर दिनुस् । तर, जिल्लाबाट कुनै लिखित जवाफ नआएपछि कार्वाही गर्न मिलेन । कसले दर्ता दिने र कसले खारेज गर्ने बिषय अन्यौलमा छ ।
बास्तवमा ठूलो उधोग खोल्न दिने वा नदिने अधिकार त नगरपालिकाको हो । तर, उधोगपतिहरुले वडाध्यक्षहरुलाई कन्भिन्स गरेर उहाँले क्रसर दर्ताको सिफारिस लिनुभयो । माफदण्ड बिपरितको क्रसर खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नियम आउँछ भने हामी खारेज गर्न तयार छौ । नियमनै यस्तो छ कि खोलाको अनुगमन गर्ने जिल्ला समितिको रौहवरमा छ ? हामी के गरौ ? नगरौ ?
१३.त्यसो भए वडाले गलत गर्दै जाने, नगरपालिकाले टुलुटुलु हेरेर बस्छ ?
—वडाले अबैध काम गर्ने र नगरपालिकाले टुलुटुलु हेर्ने काम हुदैन् । त्यस्ता व्यक्तिको प्रमाण सहित उजुरी आयो भने नगरपालिका कार्वाही गर्न बाध्य हुन्छ । क्रसर,जेसिवी अदि अबैध रुपमा चलाउछ भने कार्वाही गर्ने नगरपालिकाको अधिकार छ । हामी कार्वाही गर्छौ ।
१४.खोलामा क्रसर छ । त्यही उत्खन्न हुन्छ । तपाईंहरु घेरा हाल्नु भयो भने समाउन सकिन्छ । तर, तपार्इंहरु घेरा नै हाल्नु हुनन् ?
—हामी घेरा हाल्ने कोसिस गरेको छैन भन्ने पनि छैन । हामी चुपचाप बसेको स्थिती पनि छैन् । अखिर जवाफ त नगरपालिकालाई दिनु परेको छ । चोर कसैलाई केही दिदैनन् । चोरले त चोरैलाई दिन्छ । तर, चोरको निगरानी हामी गरिरहेको छु । त्यो चोर आज न भोली समातेर तपाईहरुको बीचमा सार्वजनिक नै गर्छु ।